परमेश्वरका न्याय र ताडनामा उहाँको प्रकटनलाई हेर्नु | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने अरूहरू करोडौँले जस्तै, हामी बाइबलका नियमहरू र आज्ञाहरूलाई पालन गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशस्त अनुग्रहमा आनन्दित हुन्छौँ, र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा एकसाथ भेला हुन्छौँ, प्रार्थना, प्रशंसा, र सेवा गर्छौँ—र प्रभुको हेरचाह र सुरक्षा हामी यी सबै गर्छौँ। हामी प्राय कमजोर छौँ, र हामी प्राय बलिया पनि छौँ। हाम्रा सबै कार्यहरू प्रभुका शिक्षाअनुसार छन् भनी हामी विश्वास गर्छौँ। तब, यो स्पष्ट छकि हामी स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा पुरा गर्ने मार्गमा छौँ भनी हामी आफैं पनि विश्वास गर्छौँ। हामी प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको, उहाँको महिमित अवतरणको, पृथ्वीमा हाम्रा जीवनको अन्त्यको, राज्यकोउदयको, र प्रकाशको पुस्तकमा अगमवाणी गरिएका सबै थोकहरूका तीव्र इच्छा गर्छौँ: प्रभु आइपुग्नुहुन्छ, उहाँले विपत्ति ल्याउनुहुन्छ, उहाँले असललाई इनाम दिनुहुन्छ र दुष्टलाई दण्ड दिनुहुन्छ, र उहाँलाई पछ्याउनेहरू सबैलाई र उहाँलाई बादलमा भेट्न उहाँको दोस्रो आगमन स्वागत गर्नेहरूलाई उहाँले लिनुहुन्छ; हामी यी सबै कुराको उत्कट चाह गर्छौं। जहिले हामी यो विचार गर्छौँ, हामी अन्तिम दिनहरूमा जन्मियौं र प्रभुको आगमनका साक्षी हुने असल भाग्य पाएकोमा हामी भावुक नभइरहन नौँ र कृतज्ञताले पूर्ण नभइरहन सक्दैनौँ। हामीले सतावट भोगेका भए पनि, हामीले यसको सट्टामा “अत्याधिक र अनन्त महिमाको काम।” पाएका छौँ। कस्तो आशिष्! प्रभुले दिनुभएका यी सबै तीव्र इच्छा र अनुग्रहले हामीलाई प्रार्थना मा लगातार गम्भिर बनाउँछ र एकसाथ भेला हुनका लागि अझै बढी लगनशीलबनाउँछ। सायद अर्को वर्ष, सायद भोली, र मानिसले कल्पना गरेकोभन्दा छोटो समयभित्र, उत्सुकताका साथ उहाँलाई पर्खिरहेका मानिसहरूका समूहका बीचमा उहाँ प्रकट भएर, प्रभु एक्कासी ओर्लनुहुनेछ। प्रभुको प्रकट हेर्नका लागि पहिलो समूहमा हुनका खातिर र उठाइलगिने मध्ये हुनहामी एक अर्कालाई उछिन्न हतार गर्नेछौँ, पछाडि छोडिन कोही पनि इच्छुकहुँदैनौँ। हामीले यस दिनको आगमनका लागि, लागतको बेवास्ता नगरी सबै थोक दिएका छौँ; कोहीले आफ्ना रोजगारीहरू छोडेका छन्, कोहीले आफ्ना परिवारहरू त्यागेका छन्, कोहीले विवाह त्यागेका छन्, र कोहीले आफ्ना सबै बचतहरूलाई दान गरेका पनि छन्। भक्तिका कस्ता निस्स्वार्थ कार्यहरू! यस्ता इमानदारिता र विश्वासयोग्यता अवश्य विगत युगका सन्तहरूका भन्दा पनि अझ परको छ! जसरी प्रभुले आफूले चाहनुभएकाहरूमाथी अनुग्रह गर्नुहुन्छ र आफूले चाहनुभएकाहरूलाई कृपा देखाउनुहुन्छ, हाम्रा भक्तिर खर्च गर्ने कार्यहरू, हामी विश्‍वास गर्छौं, लामो समयदेखि उहाँका आँखाहरूले हेरेका छन्यसरी नै, हाम्रा निष्कपटप्रार्थनाहरू पनि उहाँका कानहरूमा पुगेका छन्, र हाम्रा समर्पणका लागि प्रभुले हामीलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भनी हामी भरोसा गर्छौँ। यसबाहेक, परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँ हामीप्रति दयालु हुनुहुभएको थियो, र उहाँले हामीलाई दिनुभएका आशिषहरू र प्रतिज्ञाहरूलाई कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। हामी सबैले भविष्यका लागि योजना बनाइरहेका छौँ, र बादलमा प्रभुलाई भेट्न उठाइ लगिनको निम्ति आदानप्रदान गर्ने हाम्रा समर्पण र खर्च काउन्टर चिप्स वा पूंजी बनेको छ। अझ ठूलो कुरा त के छ भने, सारा राष्ट्रहरु र सबै जातिहरूमाथि अध्यक्षता गर्न वा राजाहरूको रूपमा शासन गर्न अलिकतिहिचकिचाहटविना, हामीले आफैंलाई भविष्यको सिंहासनमा राखेका छौँ। यी सबैलाई हामीले दिइएको रूपमा र अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै थोकको रूपमा लिन्छौँ।
प्रभु येशूका विरूद्धमा भएकाहरूलाई हामी घृणा गर्छौँ; तिनीहरू सबैका अन्त्य विनाश नै हुनेछ। प्रभु येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी विश्वास नगर्न कसले तिनीहरूलाई भन्यो? अवश्य पनि, संसारका मानिसहरूप्रति दयालु हुनुभएका प्रभु येशू लाई अनुकरण गर्ने समयहरू छन्, किनकि तिनीहरूले बुझ्दैनन्, र हामी तिनीहरूप्रति सहनशील र क्षमाशील हुनु ठीक हो। हामीले गर्ने सबै कुराहरू बाइबलका वचनहरूअनुसार हुनुपर्छ, किनकि बाइबलअनुरूप नहुने कुनै पनि कुरा आशास्त्रीय वा झूटा शिक्षा हो। यस किसिमको विश्वासले हामी प्रत्येकका मनमा गहिरो किसिमले जरा गाडेको छ। हाम्रा प्रभु बाइबलमा हुनुहुन्छ, र यदि हामी बाइबलबाट विचलित भएनौँ भने, हामी प्रभुबाट पनि अलग हुनेछैनौँ; यदि हामी यस सिद्धान्तमा रह्यौँ भने, हामीले मुक्तिपाउनेछौँ। हामी एक-अर्कालाई प्रेरणा दिन्छौँ, एउटाले अर्कोलाई सहायता गर्छौँ, र हरेक पल्ट हामी एकसाथ भेला हुँदा, हामीले भनेका र गरेका सबै कुराहरू प्रभुको इच्छाअनुसार छन् र प्रभुले यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ भनी हामी आशा गर्छौँ। हाम्रो हाम्रो अत्यन्त प्रतिकूल परिवेश हुँदाहुँदै पनि, हाम्रा हृदयहरू आनन्दले भरिएका छन्। सहज पहुँचमा भएका हाम्रा आशिषहरूलाई हामीले विचार गर्दा, के हामीले पन्छाउन नसक्ने कुनै कुरा छ र? अलग हुनका लागि हामीले संकोच मान्नुपर्ने कुनै कुरा छ र? यी सबै कुराहरू स्पष्ट छन्, र यी सबै कुराहरू परमेश्वरका चनाखा आँखा सामु नै छन्। गोबरको थुप्रोबाट उठाइएकाखाँचोमा परेका मुठ्ठीभरका हामीहरू, उठाइ लगिने वा, आशिषित हुने, र सबै राज्यहरूमाथि शासन गर्ने गरेको सपमा देख्ने, प्रभु येशूका अरू साधारण अनुयायीहरूजस्तै छौँ। हाम्रा भ्रष्टता परमेश्वरका दृष्टिमा खुला राखेका छन्, अनि हाम्रा अभिलाषाहरू र लोभहरू परमेश्वरका दृष्टिमादोषी ठहरिएका छन्। तथापि, यी सबै थोकहरू यति सामान्य रूपमा र यति तर्कसंगत किसिमले हुन्छन्, कि हाम्रा तीव्र इच्छाहरू ठीक छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा हामी कोही पनि अचम्ममा पर्दैनौँ, हामीले अवलम्बन गरेका सबै थोकको विशुद्धतामाथि शंका गर्ने कुरा त परै जाओस्। कसले परमेश्वरको इच्छालाई जान्न सक्छ? खास कस्तो किसिमको मार्गमा मानव हिँड्छ, हामीले खोज्न वा अन्वेषण गर्न जान्दैनौँ; अनि सोधपूछ गर्नमा पनि हाम्रो चासो झनै कम छ। हामीलाई उठाइ लगिन्छ कि उठाइ लगिँदैन, हामीले आशिष् पाउन सक्छौँ कि पाउँदैनौ, स्वर्गको राज्यमा हाम्रा लागि कुनै स्थान छ कि छैन, जीवनको नदीको पानी र जीवनको रूखको फलमा हाम्रो हिस्सा हुन्छ कि छैन भन्ने बारेमा मात्र हामी सरोकार राख्छौँ। के यी नै कुराहरू पाउनका खातिर हामीले प्रभुमा विश्वास गरेका र उहाँका अनुयायीहरू बनेका होइनौँ र? हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्, हामीले पश्चाताप गरेका छौँ, हामीले दाखमद्यको तीतो कचौरा पिएका छौँ, अनि हामीले हाम्रो क्रूसलाई पीठमाथि राखेका छौँ। हामीले तिरेको मूल्य प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न भनी कसले भन्न सक्छ? हामीले पर्याप्त तेलको तयारी गरेका छैनौँ भनी कसले भन्न सक्छ? हामी ती मूर्ख कन्याहरू वा ती त्यागिएकाहरूमध्येका जस्ता हुन चाहँदैनौँ। यसका साथसाथै, झूटा ख्रीष्टहरूद्वारा छलमा नपर्नका लागि हामीलाई सुरक्षित राख्न हामीले प्रभुलाई बिन्ती गर्दै, निरन्तर प्रार्थना गर्छौं, किनकि बाइबलमा यसो भनिएको छः “अनि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई, हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भनी भन्छ भने विश्‍वास नगर्नू। झूटा ख्रीष्टहरू र झूटा अगमवक्ताहरू आउनेछन् र ठुल्ठुला चिन्हहरू र चमत्कारहरू देखाउनेछन्; ताकि सम्भव भए, तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई नै छल्नेछन्” (मत्ती २४:२३-२४)। हामी सबैले बाइबलका यी पदहरूलाई कण्ठस्थ गरेका छौँ; हामीले तिनीहरूलाई हृदयले चिन्छौं, र हामीले तिनीहरूलाई बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा, जीवनको रूपमा, र हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ वा सक्दैनौँ वा उठाइ लगिन्छ वा लगिँदैन भनी निर्णय गर्ने श्रेय पत्रका रूपमा हेरेका छौँ …
हजारौँ वर्षदेखि, जीवितहरूले आफ्ना तीव्र चाहनाहरू र आफ्ना सपनाहरू तिनीहरूसँग लिएर बितिसकेका छन्, तर तिनीहरू स्वर्गका राज्यमा गए वा गएनन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि साँच्चिकै थाहा छैन। कुनै समय घटेका सबै कथाहरू बिर्सेर मृतकहरू फर्कन्छन्, अनि तिनीहरूले पितापुर्खाहरूका शिक्षाहरू र मार्गहरूलाई अझै पछ्याएका हुन्छन्। अनि यसरी, वर्षहरू बित्छन् र दिनहरू टर्छन्, हाम्रा प्रभु येशू, हाम्रा परमेश्वरले हामीहरूले गरेका सबै कुराहरूलाई साँच्चै स्वीकार गर्नुहुन्छ वा हुँदैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। हामीले गर्न सक्ने कुराचाहिँ नतीजाका लागि प्रतीक्षा गर्नु र हुन आउने कुराहरूका बारेमा अनुमान गर्नु मात्र हो। तर पनि हामीकहाँ कहिल्यै देखा नपरी, हामीसित कहिल्यै नबोली नै परमेश्वर यस अवधिभर मौन रहनुभएको छ। अनि यसरी, बाइबललाई पछ्याएर चिन्हहरूअनुसार, हामी परमेश्वरका इच्छा र स्वभावका बारेमा स्वेच्छाचारी न्यायहरू बनाउँछौँ। परमेश्वरका मौनतामा हाम्रो बानी बसेको छ; विचार गर्ने हाम्रा आफ्नै तरीकाद्वारा हाम्रा व्यवहारलाई ठीक र बेठीक भनी मापन गर्ने हाम्रो बानी परेको छ; परमेश्वरले हामीबाट माग गर्नुभएका कुराहरूको सट्टामाहाम्रा ज्ञान, अवधारणाहरू, र नैतिक नीतिहरूमा भर पर्न हामीलाई बानी परेको छ; परमेश्वरको अनुग्रहमा आनन्द लिन हामीलाई बानी परेको छ; आवश्यकता पर्दा परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुहुने सहायतामा हाम्रो बानी परेको छ; सबै थोकहरूका निम्ति परमेश्वरतिर हाम्रा हातहरू फैलाउन र परमेश्वरलाई आज्ञा गर्न हामीलाई बानी परेको छ; पवित्र आत्माले कसरी अगुवाइ गर्नुहुन्छ भनी ध्यान नदिई, नियमहरू अनुरूप चल्न हामीलाई बानी परेको छ; अनि अझ बढी त, हाम्रा मालिक हामी आफै भएको समयको हामीलाई बानी परेको छ। हामीले कहिल्यै आमनेसामने नभेटेकायस्तो परमेश्वरमा हामीविश्वास गर्छौँ। उहाँको स्वभाव कस्तो छ, उहाँसँग के छ र उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँको स्वरूप कस्तो छ, उहाँ आउनुहुँदा हामी उहाँलाई चिन्छौँ वा चिन्दैनौँ, र यस्तै खालका प्रश्नहरू—यिनीहरू कुनै एउटा पनि महत्वपूर्ण छैनन्। उहाँ हाम्रोहृदयमा हुनुहुन्छ र हामी सबैले उहाँलाई पर्खेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ, र उहाँ यस्तो वा त्यस्तो हुनुहुन्छ भनी हामीले कल्पना गर्नसक्नु नै पर्याप्त हुन्छ। हामी हाम्रा विश्वासको सराहना गर्छौँ र हाम्रा आत्मिकतालाई मूल्यवान् ठान्छौँ। हामी सबै कुराहरूलाई गोबरको रूपमा हेर्छौँ, र सबै थोकहरूलाई पैतलामुनि कुल्चन्छौँ। हामी महिमित प्रभुका विश्वासीहरू भएका हुनाले, यात्रा जति नै लामो र कठिन भए पनि, कठिनाइहरू र खतराहरू हामीमाथि आइपरे पनि, हामीले प्रभुलाई पछ्याउँदा केही कुराले पनि हाम्रा पाइलाहरूलाई रोक्न सक्दैनन्। “परमेश्‍वर र थुमाको सिंहासनबाट स्फटिकजस्तै जीवनको सफा पानीको विशुद्ध नदी बगिनिस्क्यो। त्यो नदीको दुवै किनारामा जीवनको रूख थियो, जसले बाह्र किसिमका फलहरू फलाउँथे र हरेक महिना फल दिन्थे: र त्यस रूखका पातहरू जाति-जातिहरूलाई निको पर्नलाई थियो। अनि त्यहाँ उप्रान्त कुनै सराप हुनेछैन: तर यसभित्र परमेश्‍वर र थुमाको सिंहासन हुनेछ; र उहाँका सेवकहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन्: अनि तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन्; र तिनीहरूको निधारमा उहाँको नाउँ हुनेछ। त्यहाँ कुनै रात हुनेछैन; र तिनीहरूलाई कुनै बत्ती आवश्यक पर्दैन, न त सूर्यको प्रकाशको नै आवश्यक पर्छ; किनभने परमप्रभु परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई प्रकाश दिनुहुन्छ: र तिनीहरूले सदासर्वदा नै शासन गर्नेछन्” (प्रकाश २२:१-५)। हामीले हरेक पल्ट यी शब्दहरूलाई गाउँदा, हाम्रा हृदयहरू असीम आनन्द र सन्तुष्टिले भरिन्छन्, र हाम्रा आँखाहरूबाट आँसुहरू बग्छन्। हामीलाई छान्नुभएकोमा प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँको अनुग्रहको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उहाँले यस जीवनमा हामीलाई सय गुणा दिनुभएको छ र आउने संसारमा हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। यदि उहाँले मर्नका लागि अहिले हामीलाई भन्नुभयो भने, हामीले कुनै पनि गुनासोबिना त्यसो गर्थ्यौं। हे प्रभु! कृपया चाँडै आउनुहोस्! हामी तपाईंलाई यति उत्कट रूपमा चाहन्छौं र तपाईंका खातिर सबै कुराहरूलाई त्यागेका छौँ भन्ने कुरालाई विचार गर्दै, एक मिनेट, एक सेकेन्ड पनि ढीला नगर्नुहोस्।
परमेश्वर मौन हुनुहुन्छ, र कहिल्यै हामीकहाँ प्रकट हुनुभएको छैन, तैपनि उहाँको काम कहिल्यै रोकिएको छैन। उहाँले सारा पृथ्वीलाई सर्वेक्षण गर्नुहुन्छ, सबै थोकहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, र मानिसका सबै शब्दहरू र कामहरूलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँले उहाँको व्यवस्थापनलाई मौनतापूर्वक र नाटकीय प्रभावविना मापन चरणहरू र उहाँको योजनाअनुसार सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तापनि उहाँका पाइलाहरू मानवजातिका नजीक हुनेगरी एक एक गरेर अगाडि बढ्छन्, र उहाँको न्यायासन बिजुलीको गतिमा ब्रम्हाण्डमा तैनात गरिन्छ, त्यसपछि उहाँको सिँहासन तुरून्त हाम्रा बीचमा ओर्लन्छ। त्यो कस्तो वैभवशाली दृश्य हो, कस्तो शानदार र प्रभावशाली नाटकीय दृश्य! ढुकुरजस्तै र गर्जने सिँहजस्तै गरी पवित्रआत्मा हाम्रा बीचमा आउनुहुन्छ। उहाँ बुद्धि हुनुहुन्छ, उहाँ धार्मिकता र वैभव हुनुहुन्छ, र उहाँ अधिकार चलाउँदै र प्रेम र दयाले भरिएर, हाम्रा बीचमा गोप्य रूपमा आउनुहुन्छ। उहाँको आगमनका बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन, कसैले उहाँको आगमनलाई स्वागत गर्दैन, अनि, यसका अतिरिक्त, उहाँले गर्न लाग्नुभएको कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। मानिसको जीवन पहिलेको जस्तै चल्छ, उसको हृदय केही फरक छैन, र दिनहरू सदाको झैँ गुज्रन्छन। परमेश्वर अनुयायीहरूमध्ये सबैभन्दा नगण्य र एक साधारण विश्‍वासीको रूपमा, अरू मानिसहरूजस्तै, हाम्रा माझमा बस्नुहुन्छ। उहाँका आफ्नै खोजहरू, आफ्नै लक्ष्यहरू छन्; र, यसका अतिरिक्त, उहाँसँग साधारण मानिसहरूसित नभएको ईश्‍वरत्व छ। उहाँको ईश्‍वरत्वकोपरमेश्वरत्वको अस्तित्वलाई कसैले पनि ध्यान दिएको छैन, र उहाँको र मानिसका सार बीचको भिन्नतालाई कसैले बुझेको छैन। हामी उहाँसँग स्वतन्त्र र निडर भएर एकसाथ जिउँछौँ, किनकि हाम्रा दृष्टिमा उहाँ एक मामुली विश्‍वासी बाहेक केही पनि हुनहुन्न। उहाँले हाम्रा सबै चाललाई हेर्नुहुन्छ, र हाम्रा सबै विचारहरू र धारणाहरू उहाँका सामु खुला छन्। कसैले पनि उहाँको अस्तित्वमा चासो राख्दैन, कसैले पनि उहाँकाकार्यको बारेमा कुनै कुरा कल्पना गर्दैन, र, यसका अतिरिक्त, उहाँको पहिचानको बारेमा कसैसँग अलिकता पनि शंका छैन। उहाँको हामीसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएझैँ गरी हामीले गर्ने भनेको हाम्रा खोजहरूलाई जारी राख्नु हो …
पवित्र आत्माले उहाँद्वारा वचनहरूका खण्ड अचानक व्यक्त गर्नुहुन्छ, र यो अति नै अप्रत्याशितजस्तो अनुभूति भए पनि, हामी यसलाई परमेश्वरबाट आएको वाणीको रूपमा मान्यता दिन्छौँ र यसलाई परमेश्वरबाट आएको रूपमा सहजै स्वीकार गर्छौं। त्यो हुनुको कारणचाहिँ, यी वचनहरूलाई जसले व्यक्त गरे पनि, जबसम्‍म ती पवित्र आत्माबाट आउँछन् तबसम्‍म हामीले तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहुन्न। अर्को वाणी मबाट, वा तपाईंबाट, वा अरू कसैबाट आउनसक्छ। यो जो भए पनि, सबै परमेश्वरबाटको अनुग्रह नै हो। यो जो भए पनि, हामीले यस व्यक्तिलाई आराधना गर्नु हुँदैन, किनभने जे नै भए पनि, यो व्यक्ति सम्भव त परमेश्वर हुन सक्दैन, नत हामीले कुनै किसिमले पनि यस्तो सामान्य व्यक्तिलाई हाम्रो परमेश्वर भनी छान्न नै सक्छौँ। हाम्रा परमेश्वर अति नै महान् र आदरयोग्य हुनुहुन्छ; यस्तो नगण्य व्यक्ति कसरी उहाँको स्थानमा खडा हुन सक्थ्यो? अझै अधिक कुराचाहिँ, परमेश्वर आएर हामीलाई स्वर्गको राज्यमा फर्काएर लानका लागि हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका छौँ, यसैले यति महत्त्वपूर्ण र कठिन कार्य कसरी यति तुच्छ व्यक्तिको दायित्व हुन सक्थ्यो? यदि प्रभु फेरि आउनुहुन्छ भने, यो सेतो बादलमा हुनैपर्छ, ताकि सबै भीडले देख्‍न सकून्। त्यो कति महिमित हुनेछ! उहाँ साधारण मानिसहरूको समूहमा कसरी गुप्‍त रूपमा लुक्न सम्भव हुनसक्छ?
तथापि मानिसहरूका बीचमा लुक्‍नुभएका यी साधारण व्यक्तिले नै, हामीलाई बचाउन नयाँ कार्य गरिरहनुभएको छ। उहाँले हामीलाई कुनै व्याख्या दिनुभएको छैन, न त उहाँ किन आउनुभएको हो भनी हामीलाई बताउनु नै भएको छ, तर उहाँले गर्न चाहनुभएको काम सुवुचारित कदमहरू र उहाँको योजनाअनुसार गर्नुहुन्छ। उहाँका वचनहरू र वाणीहरू अझ नियमित हुन्छन्। सान्त्वना दिने, अर्ती दिने, स्मरण गराउने, र चेतावनी दिने, हप्काउने र अनुशासनमा राख्‍नेदेखि नम्र र कोमल लवाजदेखि डरलाग्दा र वैभवशाली वचनहरूसम्‍म सबैले मानवमाथि दया देखाउँछ र उसमा भय हालिदिन्छ। उहाँले भन्नुभएका सबै कुराहरूले हामीभित्र गहिराम लुकेका गुप्‍त कुराहरूलाई प्रहार गर्छ; उहाँका वचनहरूले हाम्रा हृदयलाई डस्छन्, हाम्रा आत्माहरूलाई डस्छन्, र सहनै नसकिने लाजले हामीलाई भरेर छोडिदिन्छन्, आफैलाई कहाँ लुकाउने भन्ने कुरा जान्नै नसकिने हुन्छ। यस व्यक्तिका हृदयमा हुनुभएका परमेश्वरले साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त र उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनी हामी अचम्ममा पर्न थाल्छौँ। सायद, यी दुःखहरू भोगिसकेपछि मात्र हामी उठाइ लगिन सक्छौ? आउने गन्तव्य र हाम्रो भविष्यको अन्तको बारेमा … हामीले हाम्रा मस्तिष्कमा हिसाब गरिरहेका हुन्छौँ। पहिले झैँ, अझै पनि, हाम्रा बीचमा काम गर्न परमेश्वरले देहधारण गरिसक्नुभयो भनी हामी कसैले पनि विश्वास गर्दैनौँ। यति लामो समयदेखि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले हामीसँग आमुन्ने सामुन्ने भएर धेरै वचनहरू बोलिसक्नुभएको छ तापनि, हाम्रा भविष्यका परमेश्वरका रूपमा यस साधारण मानवलाई स्वीकार गर्न हामी अनिच्छुक रहेका छौँ, र यस नगण्य व्यक्तिलाई हाम्रो भविष्य र हाम्रो अन्तको नियन्त्रणका लागि जिम्मा दिने त परै जाओस्। उहाँबाट नै हामीले जीवित पानीको असीम आपूर्तिको आनन्द लिन्छौँ, अनि उहाँद्वारा नै हामी परमेश्वरसँग आमुन्ने सामुन्ने बस्छौँ। तर स्वर्गमा हुनुहुने प्रभु येशूको अनुग्रहको निम्ति मात्र हामी धन्यवादी छौँ, र ईश्‍वरत्व भएका यी साधारण व्यक्तिका भावनाहरूलाई कहिल्यै कुनै ध्यान दिएका छैनौँ जसमा ईश्‍वरीयता छ। अझै पनि, मानवजातिले उहाँलाई गरेको इन्कारप्रति अनभिज्ञा भए झैँ गरी, मानिसको बालकपना र अज्ञानतालाई अनन्त रूपमा क्षमा गर्ने र उहाँप्रति मानिसको अनादरप्रति सदासर्वदा सहिष्णु हुनुहुने झैँ गरी पहिलाको जस्तै, उहाँले आफ्नो काम नम्रतासाथ शरीरमा लुकेर गर्नुहुन्छ।
यी नगण्य मानिसले हामीलाई परमेश्वरको कामको एक कदमदेखि अर्कोमा अगुवाइ गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नहोला। हामी असंख्य परीक्षाहरू भएर जान्छौँ, असंख्य दण्डहरू भोग्छौँ, र मृत्युद्वारा जाँच गरिन्छौँ। हामी परमेश्वरको धार्मिक र वैभवशाली स्वभावबारे सिक्छौँ, उहाँको प्रेम र कृपामा आनन्द मनाउँछौँ, परमेश्वरको महान् शक्ति र बुद्धिको सराहना गर्छौं, परमेश्वरको प्रेमिलोपन साक्षी हुन्छौँ, र मानवलाई उद्धार गर्ने परमेश्वरको उत्कट इच्छलाई हेर्छौँ। यस साधारण व्यक्तिका वचनहरूमा, हामीले परमेश्वरका स्वभाव र सारलाई जान्न, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न, मानवको स्वभाव र सारलाई जान्न, र उद्धार र सिद्धताको बाटोलाई देख्न पाउँछौँ। उहाँका वचनहरूले हामीलाई “मर्न” लगाउँछन्, र तिनीहरूले हामीलाई “नयाँगरी जन्मन” लगाउँछन्; उहाँका वचनहरूले हामीलाई सान्त्वना दिन्छन्, तापनि हामीलाई दोषले चकनाचूर र ऋणी भएको आभास दिएर छोड्छन्; उहाँका वचनहरूले हामीमा आनन्द र शान्ति ल्याउँछन्, तर असीमित पीडा पनि ल्याउँछन्। कहिलेकहीँ हामी उहाँका हातहरूमा काटिन लगिएका थुमाहरूजस्तै हुन्छौँ; कहिलेकहीँ हामी उहाँको आँखाका नानीजस्तै हुन्छौँ, र उहाँको कोमल प्रेमको आनन्द लिन्छौँ। कहिलेकहीँ हामी उहाँका शत्रुजस्तै हुन्छौँ, र उहाँका हेराइमा उहाँको क्रोधद्वारा खरानीमा परिणत हुन्छौँ। हामी उहाँद्वारा उद्धार गरिएका मानवजाति हौँ, हामी उहाँका नजरमा भुसुना हौँ, अनि हामी हराएका थुमाहरू हौँ, उहाँ हामीलाई भेट्टाउन दिन र रात लागी पर्नुहुन्छ। उहाँ हामीप्रति दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ र हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अगुवाइ गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई ताड्ना दिनुहुन्छ र अनुशासनमा राख्‍नुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई श्राप पनि दिनुहुन्छ। रात र दिन, हाम्रा बारेमा फिक्री गर्न उहाँ कहिल्यै रोकिनुहुन्न, र हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ र वास्ता गर्नुहुन्छ, रात र दिन, हाम्रो पक्षलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न, तर हाम्रो खातिर आफ्नो जीवनधारी रगत बगाउनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति कुनै पनि मूल्य चुकाउनुहुन्छ। यो सानो र मासुले बनेको साधारण शरीरका वाणीहरूभित्र, हामीले परमेश्वरको सम्पूर्णताको आनन्द लिएका छौँ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको गन्तव्यलाई हेरेका छौँ। यसको बाबजुद पनि, व्यर्थताले हाम्रा हृदयभित्र अझै समस्या ल्याउँछ, र यस किसिमका व्यक्तिलाई हाम्रा परमेश्वरका रूपमा सक्रियपूर्वक स्वीकार गर्न हामी अझै अनिच्छुक छौँ। उहाँले हामीलाई यति धेरै मन्ना दिनुभएको भएको छ, आनन्द लिनको लागि धेरै कुरा दिनुभएको छ, तापनि यो कुनैले पनि हाम्रा हृदयमा प्रभुको स्थानलाई लिन सक्दैन। हामी यस व्यक्तिको विशेष पहिचान र दर्जालाई अति नै अनिच्छुक भएर मात्र आदर गर्छौँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्न उहाँले आफ्नो मुख खोलेर हामीलाई आग्रह नगरेसम्म, हामीले उहाँलाई चाँडै आउनुहुने परेमश्‍वरको रूपमा स्वीकार गर्न आफै अग्रसर हुँदैनौँ, तापनि उहाँले हाम्रो माझमा लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएको छ।
हामीले के गर्नुपर्छ भनी हामीलाई अर्ती दिन र उहाँको हृदयमा आवाज दिएर परमेश्वरले विभिन्न तरीकाहरू र दृष्टिकोणहरू प्रयोग गरेर आफ्ना वारणीहरूलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूले जीवन शक्ति बोक्छन्, हामीले हिँड्नुपर्ने मार्ग हामीलाई देखाउँछन्, र सत्यता के हो भनी बुझ्न हमीलाई सक्षम बनाउँछन्। हामी उहाँका वचनहरूद्वारा खिँचिन थाल्छौँ, हामी उहाँका बोलाइको सुर र तरीकामा ध्यानकेन्द्रित गर्न शुरू गर्छौँ, र यस अतुलनीय व्यक्तिका भित्री भावनाहरूमा अवचेतन रूपमा हामी चासो दिन शुरू गर्छौँ। हाम्रा पक्षमा काम गर्न उहाँले आफ्नो जीवनधारी रगत बगाउनुहुन्छ, हाम्रो खातिर निद्रा र भोक गुमाउनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति रूनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति सुस्केरा हाल्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति शोक गर्नु, हाम्रो गन्तव्य र उद्धारका खातिर अपमानित हुनुहुन्छ र हाम्रा संवेदनशुन्यता र विद्रोहीपनले उहाँको हृदयबाट आँसु र रगत बगाउँछन्। हुने र लिने यो तरीका कुनै साधारण व्यक्तिको हुँदैन, नत कुनै पनि भ्रष्ट मानवजातिले नै यसलाई प्राप्त गर्न वा हासिल गर्न सक्छ। कुनै पनि साधारण व्यक्तिमा नभएको सहनशीलता र धैर्यता उहाँले देखाउनुहुन्छ, र उहाँको प्रेम कुनै सृजिएको प्राणीलाई दिइने कुरा होइन। उहाँबाहेक अरू कसैले पनि हाम्रा विचारहरू जान्दैन, वा हाम्रा स्वभाव र सारलाई स्पष्ट र पूर्ण रूपमा बुझ्दैन, वा मानवजातिको विद्रोह र भ्रष्टता न्याय गर्दैन, वा हामीसँग बोल्दैन र स्वर्गका परमेश्वरका पक्षमा यसरी हाम्रा बीचमा काम गर्दैन र बोल्दैन। उहाँले बाहेक अरू कोहीले पनि अधिकार, बुद्धि, र परमेश्वरको गरिमा दिँदैन; परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरसँग के छ र उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तिनीहरूका पूर्णतामा ल्याइन्छ। उहाँबाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई बाटो देखाउन र हामीलाई ज्योतिमा ल्याउन सक्दैन। सृष्टिभएदेखि आजसम्म पनि परमेश्वरले प्रकट नगर्नुभएको रहस्यलाई उहाँबाहेक अरू कसैले प्रकट गर्न सक्दैन। उहाँबाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई शैतानको बन्धनबाट र हाम्रो आफ्नै भ्रष्टताबाट बचाउन सक्दैन। उहाँले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको भित्री हृदय, परमेश्वरका अर्तीहरू, र सबै मानवजातिमाथि परमेश्वरका न्यायका वचनहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले नयाँ युग, नयाँ कालखण्ड शुरू गर्नुभएको छ, र नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी र नयाँ काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ, र उहाँले अस्पष्टतामा लैजाने जीवनलाई अन्त्य गरी हामीमा आशा ल्याउनुभएको छ, र उद्धारमा लैजाने मार्ग पूर्ण स्पष्टतामा हेर्न हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सक्षम बनाउनुभयो। उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई जित्नुभएको छ र हाम्रा हृदयहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस क्षणपछि, हाम्रा मन चेतनशील भए, र हाम्रा आत्मा पुनर्जीवित भएः यी साधारण, नगण्य व्यक्ति, जो हाम्रो बीचमा बस्नुहुन्छ र लामो समयदेखि हामीद्वारा तिरस्कृत हुनुभएको छ—के यो हाम्रा प्रभु येशू नै हुनुहुन्न र, जो जहिले पनि हाम्रा विचारहरूमा हुनुहुन्छ, बिउँझिँदा वा सपनामा हुँदा, र जसलाई हामी रात दिन चाह गर्छौँ? यो उहाँ नै हुनुहुन्छ! के यो साँच्चै उहाँ नै हुनुहुन्छ! उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ! उहाँ सत्य, बाटो, र जीवन हुनुहुन्छ! उहाँले हामीलाई फेरि जिउन र ज्योति देख्न सक्षम बनाउनुभएको छ र हाम्रा हृदयहरूलाई बहकिनबाट रोक्नुभएको छ। हामी परमेश्वरका घरमा फर्केका छौँ, हामी उहाँको सिँहासनको सामु फर्केका छौँ, हामी उहाँसँग आमुन्ने-सामुन्ने छौँ, हामीले उहाँको मुहार देखेका छौँ, र हामीले हाम्रो अगाडिको बाटो देखेका छौँ। यसबेला, उहाँले हाम्रा हृदयलाई पूर्ण रूपमा जित्‍नुभएको छ; उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अब हामी शंका गर्दैनौँ, उहाँको काम र उहाँका वचनलाई विरोध गर्दैनौँ, र हामी उहाँका सामु लम्पसार पर्छौँ। हाम्रा पूरै बाँकी जीवनभरि परमेश्वरका पाइलाहरू पछ्याउन, उहाँद्वारा सिद्ध पारिन, उहाँको अनुग्रहको ऋण तिर्न, र हाम्रा निम्ति भएको उहाँको प्रेमको ऋण तिर्न गर्न, उहाँको योजना र प्रबन्धमा आज्ञाकारी हुन, र उहाँको काममा साथ दिन, र उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएका कुराहरूलाई पूरा गर्न सक्नुभन्दा अरू हामीले केही कुराको पनि चाहना गर्दैनौँ।
परमेश्वरद्वारा जितिनु भनेको मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जस्तै हो।
परमेश्वरका वचनहरूमध्ये प्रत्येकले हामीलाई घाइते बनाएर डरले भरेर छाडीदिदै, हाम्रा मरणशील बिन्दुहरू मध्ये एउटामा प्रहार गर्छन्। उहाँले हाम्रा अवधारणहरू, हाम्रा कल्पनाहरू, र हाम्रा भ्रष्ट स्वभावलाई उजागरगर्नुहुन्छ। हाम्रो लाज लाई कुनै लुक्ने ठाउँ नराखिकन हामीलाई डर र त्रासको अवस्थामा राखेर, हामीले भन्ने र गर्ने कुराहरूदेखि, हाम्रा प्रत्येक विचारहरू र धारणहरूसम्म, हाम्रा स्वभाव र सार उहाँका वचनहरूमा प्रकट हुन्छन्। हाम्रा सबै दयनीय असिद्धतालाई उजागर भएको महसुस गराएर र पूर्ण रूपमा राजी गराएर, उहाँले हाम्रा सबै कार्यहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू, र नियतहरू, र हामीले कहिल्यै पत्ता नलगाएका हाम्रा भ्रष्ट स्वभावका बारेमा पनि एक एक गरेर बताउनुहुन्छ। उहाँको विरोध गरेकामा उहाँले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँको निन्दा गरेकोमा र उहाँलाई दोष लगाएकोमा हामीलाई ताड्ना दिनुहुन्छ, अनि उहाँका नजरमा हामीसँग मुक्तिपाउने एउटा पनि विशेषता छैन, कि हामी जीवित शैतान हौँ भन्ने हामीलाई अनुभूत गराउनुहुन्छ। हाम्रा आशाहरू चकनाचूर हुन्छन्, कुनै पनि अनुचित मागहरू गर्ने आँट पनि हामी गर्दैनौँ वा उहाँको कुनै आशा ग्रहण गर्दैनौँ, अनि हाम्रा सपनाहरू पनि रातारात हराउँछन्। हामी कसैले पनि कल्पना गर्न नसक्ने र हामी कसैले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने तथ्य यही हो। एकै क्षणमा, हामी हाम्रो भित्री सन्तुलनलाई गुमाउँछौँ र अगाडि अवस्थित बाटोमा कसरी निरन्तरता दिने भनी वा हाम्रो विश्‍वासहरूमा कसरी अघि बढ्नेसो जान्दैनौँ। हाम्रो विश्वास पहिलेकै क्षेत्रतिर फर्केर गएको जस्तो देखिन्छ, र हामीले कहिल्यै प्रभु येशूलाई नभेटेको वा उहाँलाई नचिनेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रा आँखा अगाडिका सबै कुराहरूले हामीलाई अन्योलताले भर्छ र हामीलाई अनिर्णायक किसिमले ढुलमुले बनाउँछ। हामी उदास हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ, र हाम्रा हृदयहरूका गहिराइमा अदम्य रीस र अपमान हुन्छ। हामीले निकाल्ने प्रयास गर्छौं, निकास दिन खोज्छौँर, यसको अलवा, हामी हाम्रा मुक्तिदाता येशूलाई निरन्तर पर्खिरहन्छौँ ताकि हामीले हाम्रा हृदयका कुराहरू उहाँमा पोखाउन सकौँ। हामी बाहिरपट्टि सहज भएको देखिने समयहरू भए पनि, न त घमण्डी, न नम्र, हामीले पहिले कहिल्यै अनुभूति नगरेका हारको भावनाले हाम्रा ह्रदयहरूमा हामी ग्रसित हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी बाहिरपट्टि असामान्य रूपमा शान्त देखिए तापनि, हाम्रा मनहरू समुद्री आँधीजस्तै पीडाले मडारिरहेका हुन्छन्। उहाँका न्याय र ताडनाले हाम्रा फजुल चाहनाहरूलाई अन्त्य गर्दै र उहाँ हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र हामीलाई मुक्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्न हामीलाई अनिच्छुक छोडिदिदै, हाम्रा सबै आशाहरू र सपनाहरूबाट हामीलाई वञ्चित गर्छन्। उहाँका न्याय र ताड्नाले हामी र उहाँका बीचमा एक खाल्डो बनाएका छन्, यो यति गहिरो छ कि कोही पनि यसलाई नाघेर जान इच्छुक हुँदैन। उहाँका न्याय र ताड्नालाई हामीले हाम्रा जीवनमा पहिलो पल्ट यति ठूलो अवरोध, यति ठूलो अपमानको रूपमा भोगेका छौँ। उहाँका न्याय र ताड्नाले हामीलाई परमेश्वरको सम्मानर मानिसको अपमानको असहिष्णुताको सराहना गर्ने बनायो, यसको तुलनामा हामी अत्यन्त तुच्छ र अशुद्ध छौ। हामी कति घमण्डी र अहङ्कारी छौँ, र मानिस कसरी कहिल्यै परमेश्वरको बराबरी हुन सक्दैन, वा परमेश्वरसँग समान हुन सक्दैन भनी उहाँका न्याय र ताड्नाले हामीलाईसर्वप्रथम महसुस गर्ने बनाएकोछ। उहाँका न्याय र ताड्नाले यस्तो भ्रष्ट स्वभावमा अझै नजिउन, यस स्वभाव र सारबाट जतिसक्दो चाँडो आफैलाई स्वतन्त्र पार्न, र उहाँप्रति दुष्ट र घृणित नहुनका लागि हामीलाई इच्छुक नहुने बनाएको छ। उहाँका न्याय र ताड्नाले उहाँका योजनाहरू र प्रबन्धहरूका विरूद्धमा अब कुनै विद्रोह नगरीकन उहाँका वचनहरूलाई पालना गर्न हामीलाई खुशी पारेको छ। उहाँका न्याय र ताड्नाले फेरि एकपल्ट हामीलाई बाँच्ने इच्छा दिएका छन् र उहाँलाई हाम्रा मुक्तिदाताका रूपमा स्वीकार गर्न हामीलाई खुशी बनाएको छ …। हामी कब्जाको कामबाट बाहिर, नरकबाट बाहिर, मृत्युको छायाँको घाटीबाट बाहिर निस्केका छौँ …। सर्वशक्तिमान् परमेश्वरले हामीलाई, मानिसहरूका यो समूहलाई पाउनु भएको छ! उहाँले शैतानलाई जित्नुभएको छ र उहाँका शत्रुहरूका भीडलाई हराउनु भएको छ!
हामी भ्रष्ट शैतानी स्वभावले भरिएका, युगहरूभन्दा पहिलेबाट नै परमेश्वरले पूर्वनिर्धारित, र खाँचोमा परेकाहरू फोहोरको डङ्गुरबाट परमेश्वरले उठाउनुभएका यस्ता साधारण मानिसहरूका समूह मात्र हौँ। कुनै समय हामीले परमेश्वरलाई इन्कार गर्‍यौँ र उहाँको निन्दा गर्‍यौँ, तर अहिले उहाँद्वारा जितिएका छौँ। परमेश्वरबाट हामीले जीवन र अनन्त जीवनको बाटो पाएका छौँ। पृथ्वीमा हामी जहाँ भए पनि, हामीले जस्तासुकै सतावटहरू र कष्टहरू सहे पनि, हामी सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मुक्तिबाट अलग हुन सक्दैनौँ। किनकि उहाँ हाम्रा सृष्टिकर्ता, र हाम्रा एक मात्र उद्धार हुनुहुन्छ!
परमेश्वरको प्रेम मुहानको पानी झैँ फैलिन्छ, अनि तपाईं, र म, र अरूहरू, र तिनीहरू सबैलाई दिइएको छ जसले साँचो रूपमा सत्यता खोजी गर्छन् र परमेश्वरको प्रकटनलाई प्रतीक्षा गर्छन्।
जसरी चन्द्रमाले सूर्यलाई अनन्त चक्रमा पछ्याउछ, यसरी नै परमेश्वरको काम कहिल्यै रोकिँदैन, अनि यसलाई तपाईंहरूमाथि, ममाथि, अरूहरूमाथि, र परमेश्वरका पाइला पछ्याउनेहरू सबैमाथि र उहाँको न्याय र ताड्नालाई स्वीकार गर्नेहरूमाथि कार्यान्वयन गरिन्छ।
अघिल्लो: सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर देखा पर्ने घटना र उहाँको कार्य